ဗီဂျေး၏ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များရုပ်ရှင် (25) - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
ဗီဂျေး (၂၅) စီးကူးထားသောဟိန္ဒူဘာသာဝင်များစာရင်း။
တမီးလ်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းစူပါစတား, ဗီဂျေး နှစ်ပေါင်းများစွာအများအပြားစူပါ hit ရုပ်ရှင်ပေးထားတယျ။ ပါရမီရှင်သရုပ်ဆောင်သည်တမီလ်ရုပ်ရှင်၏သြဇာအရှိဆုံးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ လူတွေကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု - အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်သူနောက်ကလိုက်တဲ့ပရိသတ်ဟာကြီးမားလှပါတယ်။ ဗီဂျေးသည်သူ၏ဖခင်ရုပ်ရှင်များတွင်ကလေးအနုပညာရှင်အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင်တာအပြင်သူလည်းပြန်ဖွင့်တဲ့အဆိုတော်ပါ။ ဒီတော့ဗီဂျေးရုပ်ရှင်တွေလို့ခေါ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာစာရင်းကိုဒီမှာကြည့်ပါ။
၁ ။ Vettaikaaran 'Dangerous Khiladi 3' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်
Vettaikaaran (၂၀၀၉) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး B. Babusivan မှဒါရိုက်တာဖြစ်သည် ဗီဂျေး နှင့် မသီတာရှာတီ ။ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်အမည်တပ်ထားသည် 'အန္တရာယ်ရှိသောခီလာဒီ ၃' ။
ကြံစည်မှု - ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်လိုသော Ravi သည်အပျက်သဘောဆောင်သောအရာများနှင့်ပြtroubleနာတက်လေ့ရှိသည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Uma ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာသူဟာ Kingpin နဲ့လေးနက်တဲ့ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
နှစ်ခု။ ' Velayudham ကို 'Super Hero Shahenshah' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
ချစ်သူ (၂၀၁၁) သည်အိန္ဒိယရာဇဝင်၌အမ်ရာဂျာရေးသားပြီးဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ဗီဂျေးနဲ့အတူပါ Hansika motwani ဦး ဆောင်အဖြစ် Abhimanyu singh , Genelia D'Souza , Saranya Mohan နှင့် Santhanam ထောက်ပံ့အခန်းကဏ္ supporting ၌တည်၏။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ box-office မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည် 'Super Hero Shahenshah' ။
ကြံစည်မှု - ပါကစ္စတန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်မှုပြန့်ပွားစေရန်အတွက်တမီးလ်နာဒူးပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအားပြန်ပေးဆွဲသည်။ ဂျာနယ်လစ်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Bharathi သည် Velayudham ဟုခေါ်သောစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်ကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
၃ ' Kaavalan ကိုဟိန္ဒူဘာသာတွင် 'Main Hoon Bodyguard' ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
ကဗျာ (၂၀၁၁) သည်ဗီဒီယာနှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသော Siddique မှရိုက်ကူးပြီးဒါရိုက်တာဖြစ်သောအိန္ဒိယတမီးလ်ဘာသာစကားဖြင့်ချစ်သောဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် ငန် ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာရိုက်ချက်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့လည်းခေါ်ကြတယ် 'Main Hoon Bodyguard' ။
ကြံစည်မှု - Bhoomi သည် Muthuramalingam နှင့်သူ၏သမီး Meera ကိုအလွန်လေးစားသည်။ Meera ၏သက်တော်စောင့်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရချိန်တွင်သူသည်သူမတွေ့ခဲ့ဖူးသည့်မိန်းကလေးနှင့်သူမချစ်သူဖြစ်သော်လည်းသူသည် Meera မှလွဲ၍ မည်သူဖြစ်သည်ကိုသတိမထားမိပါ။
၄ ' Azhagiya Tamil Magan ကို 'Sabse Bada Khiladi' ဟုဟိန္ဒီဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်
Azhagiya Tamil Magan (2007) သည် Bharathan မှရိုက်ကူးထားသောတမီလ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သည်ဗီဂျေးအားအဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည် Shriya Saran , Namitha နှင့် N. Santhanam တို့ကထောက်ပံ့ရေးအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုလာသောသေတ္တာကြီးအဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်အမည်တပ်ထားသည် 'Sabse Bada Khiladi' ။
ကြံစည်မှု - Guru သည် ESP ရောဂါရှိသည့် MBA ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ရူပါရုံအားလုံးပြည့်စုံလာသည်နှင့်အမျှသူသည်မိမိ၏ရည်းစားအားထိုးနှက်နေသည်ကိုတွေ့သောအခါသူသည်မွန်ဘိုင်းသို့ပြေးသွားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူကကောက်သူတစ် ဦး lookalike ရှိပါတယ်။
အဖြစ် '' ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသော '' Thalaivaa '' 'Thalaivaa - ခေါင်းဆောင်'
Thalaivaa (2013) သည်အေအယ်လ်ဗီဂျေးမှရေးသားပြီးရိုက်ကူးထားသောအိန္ဒိယတမီးလ်ဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်သောလူဆိုးဂိုဏ်းသဘင်သည်။ ဗီဂျေးကပါ။ Amala Paul နှင့်အတူ Abhimanyu Singh က Sathyaraj နှင့် Santhanam ထောက်ပံ့အခန်းကဏ္ in အတွက်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ box-office မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီး Hindi လို့လည်းခေါ်ပါတယ် 'Thalaivaa - ခေါင်းဆောင်' ။
ကြံစည်မှု - Vishwa သည်ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ dancer ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်သည်။ သူ့အဖေသည်မွန်ဘိုင်းတွင်လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူသတိမထားမိကြောင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်သူ၏ကောင်းချီးများကိုရှာရန်ဗီရှဝါသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့လာသောအခါသူ၏ဘဝသည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။
၆ ။ Sachein 'အား Ghamandee' ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
မျိုး (၂၀၀၅) သည်ဂျီအမ်ဟန်ဒရန်း (Vijay) နှင့်ဘောလီးဝုဒ်မှမင်းသမီး Genelia D'Souza သရုပ်ဆောင်ထားသောတမီလ်ရင်ခုန်စရာဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Bipasha Basu Vadivelu၊ Santhanam နှင့် Raghuvaran တို့ကပံ့ပိုးပေးသောအခန်းကဏ္inတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box Office မှာစီးပွားဖြစ်ဝင်ငွေအဖြစ်ကြေငြာခံခဲ့ရပြီးခေါင်းစဉ်အောက်မှာဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် '' Ghamandee '' ။
ကြံစည်မှု - တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခံစားချက်များကိုငြင်းပယ်ရန်ကြိုးစားသည့်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်အကြားကောလိပ်ကျောင်းရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာတြိဂံ။ သူငယ်အတွက်နူးညံ့သောထောင့်ရှိသည့်ကထိကတစ် ဦး ၏ ၀ င်ရောက်လာခြင်းကအခြေအနေများကိုပြောင်းလဲစေသည်။
၇ ။ Thuppakki '' အိန္ဒိယစစ်သားဘယ်တော့မှအားလပ်ရက်အပေါ် '' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ရှိ
Thuppakki (၂၀၁၂) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်ဘာသာစကားဖြင့်လှုပ်ရှားသောရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး AR Murugadoss မှရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Vijay နှင့် Kajal Aggarwal တို့ကိုအဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ Vidyut Jammwal အထောက်အကူပြုအခန်းကဏ္ in များတွင်ရန်သူအဖြစ် Jayaram နှင့် Sathyan အဖြစ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာနာမည်ကြီးပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် 'အိန္ဒိယစစ်သားဘယ်တော့မှအားလပ်ရက်တွင်' ။
ကြံစည်မှု - စစ်တပ်မှကပ္ပတိန်တစ် ဦး သည်မွန်ဘိုင်းကိုသူ့မိသားစုနှင့်အတူသွားရန်နှင့်သင့်တော်သောသတို့သမီးကိုရှာဖွေသည်။ သို့သော်မြို့တွင်း၌ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကသူသည်မြို့ထဲရှိအကြမ်းဖက်အိပ်ပျော်နေသောဆဲလ်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
၈ ။ Kuruvi 'ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်' Jo Jeeta Wohi Baazigar 'အဖြစ်အမည်တပ်ခဲ့သည်
Kuruvi (2008) Dharani ကရေးသားနှင့်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး တမီးအရေးယူရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင် Vijay, ထရီရှာ နှင့် Suman ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ in ။ ဗီဗစ်၊ အက်ရှ်ရှ်ဗီဒီယာသီ၊ Manivannan နှင့် Malavika တို့သည်ရုပ်ရှင်၌အခြားအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်ပျှမ်းမျှဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည် 'Jo Jeeta Wohi Baazigar' ။
ကြံစည်မှု - တစ် ဦး ကသားတစ် ဦး ခိုးယူစိန်ချိတ်ဆက်သောမိမိအဘ၏ပျောက်ဆုံးမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်လူကိုရှာဖွေထွက်သတ်မှတ်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်လူကြမ်း၏စိန်ကိုခိုးယူပြီးသူ၏ညီမနှင့်အတူပြေးသွားသည်။
(၉) 'Coimbatore Mappillai' ကိုဟိန္ဒူဘာသာအား 'Rampuri Damaad' ဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။
Coimbatore Mappillai (၁၉၉၆) သည်စီရမ်ဂန်နာတန်မှတီးလ်မာရင်သွေးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ Vijay နှင့် Sanghavi တို့သည်အဓိကအခန်းကဏ္ roles မှပါ ၀ င်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည်အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ 'Rampuri Damaad' ။
ကြံစည်မှု - Balu သည်မြို့တော်သို့လာရောက်ပြီးသူ၏သူငယ်ချင်းနှင့်အတူရှိနေသည်။ သူသည်သူ၏အိမ်ရှင် Sumithra ကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ သို့သော်သူမ၏မကောင်းသောဝမ်းကွဲ Mahesh ကသူမကိုမျက်လုံးချင်းဆုံ။ သူတို့ကြားတွင်ကွဲလွဲမှုရှိသည်။
၁၀ ။ Villu 'ကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်' 'ဟုခေါ်တွင် ek Aur Jaanbaaz Khiladi ''
Villu (၂၀၀၉) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်အရေးအသားမာလာလာရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးရေးသားပြီးရိုက်ကူးခဲ့သည် Prabhu Deva ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကြယ် နာယက Ranjitha နှင့် Vijay တို့သည်နှစ်ဆသောအခန်းကဏ္inတွင်ရှိသည် Prakash Raj သည်အခြားထင်ရှားသောအခန်းကဏ္မှပါ။ Manoj K. Jayan, Vadivelu, Adithya နှင့် Geetha တို့သည်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိနှင့်တစ်ခုလုံးကိုလာသောသေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် 'Ek Aur Jaanbaaz Khiladi' ။
ကြံစည်မှု - အကျင့်ပျက်ရဲအရာရှိသုံး ဦး ကမှားယွင်းစွာရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးအသတ်ခံခဲ့သည့်စစ်တပ်အရာရှိတစ် ဦး အားသားဖြစ်သူကသူ၏ဖခင်အားလက်စားချေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းစွာဖြင့်သူသည်လူသတ်သမားတစ် ဦး ၏သမီးနှင့်လည်းချစ်မိသွားသည်။
တကျိပ်တပါး။ ' Sivakasi ကို 'Virasat Ki Jung' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Sivakasi (၂၀၀၅) သည် Perarasu မှတီးလ်မာလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Vijay, Asin နှင့် Prakash Raj သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သည်ဝေဖန်သူများ၏အပြုသဘောဆောင်သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုရရှိခဲ့ပြီး Hindi ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည် 'Virasat Ki Jung' ။
ကြံစည်မှု - သူ၏အစ်ကို၏အမှားများ၏အကျိုးဆက်များကိုရင်ဆိုင်ပြီးနောက် Muthappa သည်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုပြောင်းလဲနှင့်အသစ်စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ သို့သော်သူချစ်သောမိန်းကလေးသည်သူအိမ်သို့ပြန်လာပြီးမိမိကိုရွေးနှုတ်သည်အထိလက်ထပ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
၁၂ ‘ Madurey ကို 'Sarfarosh Dobaara' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
မန္တလေး (2004) သည် Ramana Madesh မှရိုက်ကူးသောတမီးလ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအခန်းကဏ္Vတွင် Vijay နှင့် Pasupathy ကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Sonia Agarwal၊ Rakshitha နှင့် Tejashree နှင့် Vadivelu တို့ကိုပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ blockbuster ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အခေါ်ခံရသည် 'Sarfarosh Dobaara' ။
ကြံစည်မှု - ခရိုင်စုဆောင်းသူ Madhuravel သည်မြို့တော်ကိုရာဇ ၀ တ်သားများမှဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးလူသတ်မှုအတွက်အရေးယူခံရသောအခါမြေအောက်သို့အတင်းအဓမ္မပြောင်းခိုင်းသည်။ သူကလူသတ်သမားကိုဖော်ထုတ်ပြီးသူ့နာမည်ကိုရှင်းလင်းနိုင်မှာလား။
13. 'Gundaraaj 2' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ် '' Thamizhan '
bigg သူဌေး telugu ရာသီ2ရက်စွဲ
သမာဓိ (၂၀၀၂) သည်ပွဲ ဦး ထွက် Majith မှရိုက်ကူးထားသောတမီလ်လှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်နှင့်အတူအဓိကအခန်းကဏ္ in အတွက် Vijay သရုပ်ဆောင် Priyanka chopra ။ Revathi, Nassar, Ashish Vidyarthi နှင့် Vivek တို့သည်လည်းရုပ်ရှင်၌အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒါဟာ box Office ရဲမှာထိမှန်အဖြစ်ကြေညာခြင်းနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်ခဲ့သည် 'Gundaraaj 2' ။
ကြံစည်မှု - Surya သည်ဥပဒေနှင့်တရား ၀ င်မှုကိုယုံကြည်သောရိုးသားသောရှေ့နေဖြစ်သည်။ သူသည်တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲတွင်သူ၏အစ်မနှင့်သူမ၏ရှေ့နေခင်ပွန်းကိုလည်းရှုံးခဲ့သည်။
၁၄ ‘ Vaseegara ကိုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်“ Ek Aur Loafer” ဟုခေါ်သည်။
Vaseegara (2003) သည် K. Selva Bharathy မှရိုက်ကူးထားသောတမီလ်ရင်ခုန်စရာဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဗီဂျေးနှင့် နင် Vadivelu၊ Nassar နှင့် Manivannan တို့သည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်စီးပွားဖြစ် hit ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် 'Ek Aur Loafer' ။
ကြံစည်မှု - အလုပ်တစ်ခုရှာရန် Bhupathi သည်မြို့တော်သို့ သွား၍ သူ၏ဖခင်၏သူငယ်ချင်း Viswanath အိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ သူကမိသားစုနှင့်နီးကပ်လာနှင့်ပြီးသားစေ့စပ်သူ Viswanath ရဲ့သမီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်ပါတယ်။
တစ်ဆယ့်ငါး '' ချစ်သူ '' Thakur Bhavani Singh က '' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက် Dubbed
ချစ်သူ (1993) အက်စ်အေ Chandrasekhar ရိုက်ကူးထားတဲ့တမီးလ်လှုပ်ရှားမှု - အချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်။ Vijayakanth သည် titular အခန်းကဏ္ does မှပါဝင်နေစဉ်ရုပ်ရှင်သည် Vijay နှင့် Yuvarani ကိုအဓိက ဦး ဆောင်နေသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် 'Thakur Bhavani Singh' ။
ကြံစည်မှု - ဗီဂျေးက Meena ကိုချစ်သည်။ သို့သော် Meena ၏အစ်ကိုကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးမိသားစုများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားဆန့်ကျင်။ Sendoorapandi ထောင်ကနေပြန်လာပြီးသူ့အစ်ကိုကိုချစ်ဖို့ကူညီဖို့ကြိုးစားသည်။
၁၆ ။ Jilla 'ကို Hindiw တွင်' Policewala Gunda2'ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ဂျီလာ (2014) သည် R. တီ Neason မှရိုက်ကူးပြီးရိုက်ကူးထားသောအိန္ဒိယတမီးလ်ဘာသာစကားဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုပြသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ကြယ်ပွင့် မိုဟာမက် , ဗီဂျေးနှင့် Kajal Aggarwal အခန်းကဏ္supportingကိုထောက်ပံ့အတွက် Soori, Mahat Raghavendra နှင့် Sampath Raj တို့တွင် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်အမည်ပေးထားသည် 'Policewala Gunda 2' ။
ကြံစည်မှု - Sivan, တစ် ဦး Madurai-based လူဆိုးဂိုဏ်း, Shakthi, သူ့အသေခံယာဉ်မောင်းရဲ့သားမွေးစား။ သူ့အဖေကိုရဲအရာရှိတစ် ဦး အသတ်ခံရတာကိုမျက်မြင်တွေ့တဲ့ Shakthi က Sivan ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သူ့အဖေသေဆုံးမှုကိုလက်စားချေရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၇ ‘ ထေရဝါဒ '' Dil Ki Baat '' ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်
ထေရဝါဒ (၂၀၀၀) သည် K. Selva Bharathy မှရေးသားသောဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Vijay နှင့် Simran တို့သည်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်ပြီးအက်စ်ပီ Balasubrahmanyam၊ Vivek နှင့် Radhika Chaudhari တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိနှင့် blockbuster ကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် 'Dil Ki Baat' ။
ဘယ်အချိန်မှာပျားရည် Singh ကမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်
ကြံစည်မှု - ဗီဂျေးသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သျောလညျး, မိမိအဘ၏အခိုင်အမာအပေါ်သူက Priya လက်ထပ်ပေမယ့်ယခုနှစ်အကုန်မှာသူကသူတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုဆက်လက်သို့မဟုတ်မဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြထားသည်။
၁၈ ‘ Thirupaachi ' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'Insaaf Ki Talwar'
သီရိလင်္ကာ (၂၀၀၅) သည် Perarasu မှရေးသားထားသောဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်တမီးလ်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သည် Vijay၊ Trisha နှင့် Mallika တို့ကိုအဓိကနေရာတွင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Livingston, Pasupathy, Benjamin, Kota Srinivasa Rao, Vaiyapuri နှင့် Manoj K. Jayan တို့ပါဝင်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာအလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် 'Insaaf Ki Talwar' ။
ကြံစည်မှု - ရွာတစ်ရွာမှပန်းပဲဆရာ Sivagiri သည်သူ၏အစ်မနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် Chennai သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ မြို့သည်သာမန်လူများအတွက်လုံခြုံသောနေအိမ်မဟုတ်ကြောင်းသူမြင်သောအခါသူသည်ကိစ္စကိုသူ့လက်ထဲသို့လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။
19. ‘ Nilaave vaa 'ဟိန္ဒူဘာသာအား' Ek Aur Sikander 'ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
Nilaave Vaa (1998) သည် A Venkatesh မှရိုက်ကူးထားသောတမီးလ်အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ Sijnijavi, Raghuvaran နှင့် Manivannan တို့ကအဓိကပံ့ပိုးပေးသည့်အခန်းကဏ္Vတွင် Vijay နှင့် Suvalakshmi တို့ကိုအဓိကဇာတ်ကောင်နေရာတွင်သရုပ်ဆောင်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် Box Office တွင်ပျမ်းမျှဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည် 'Ek Aur Sikander' ။
ကြံစည်မှု - Siluvai သည်ခရစ်ယာန်ကောင်လေး Saghetha နှင့် Raghuvaran တွင်စေ့စပ်ထားသူဖြစ်သည်။ သူမ၏ဖခင်ဟိန္ဒူ - ခရစ်ယာန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုလက်မခံချင်ပါဘူး။ သို့သော် Raghuvaran သူတို့ကိုစည်းလုံးစေ။
နှစ်ဆယ်။ ' Theri 'ကို Theri' ဟုဟိန္ဒီဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်
Theri (၂၀၁၆) သည်အိန္ဒိယတမီးလ်ဘာသာစကားဖြင့်သရုပ်ဆောင်ထားသော Thriller ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Atlee မှရိုက်ကူး။ ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်တွင်ဗီဂျေးပါ ၀ င်သည်။ မခင်မာရုသ Prabhu နှင့် မေီဂျက်ဆင် အခြားသူများအကြား Mahendran, Prabhu နှင့် Raadhika Sarathkumar တစ် ဦး ensemble သရုပ်ဖွဲ့စည်းနေစဉ်, အဓိကအခန်းကဏ္အတွက်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box-office မှာ blockbuster ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့လည်းခေါ်ပါတယ် 'Theri' ။
ကြံစည်မှု - သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုဖုံးကွယ်ထားကာ DCP Vijaya Kumar သည်သူ၏သမီးကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုရက်စက်စွာနှင်ထုတ်ခြင်းခံရ၏။ သို့သော်သူမ၏ဘဝသည်အချို့သော goons များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုခံရသောအခါသူသည်နိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး နှင့်ရမှတ်ဟောင်းများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
နှစ်ဆယ့်တစ်။ ' လူငယ်ကို 'လူငယ်' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
လူငယ် (၂၀၀၂) သည် Vincent Selva ရိုက်ကူးသောတမီးလ်အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ Vijay နှင့် Shaheen Khan တို့သရုပ်ဆောင်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ appeared မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ Yugendran, Vivek, Manivannan နှင့် Sindhu Menon တို့သည်အခြားအဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box Office ရဲမှာ hit ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုအတူတူပင်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဟိန္ဒူအတွက်အမည်ရှိခဲ့သည် 'လူငယ်' ။
ကြံစည်မှု - Aruna သည်သူတို့၏မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့၌ Shiva ကိုစွန့်ပစ်သည်။ သူသည်အခြားမြို့တစ်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ကာ Sandhya သို့သွားသည်။ ဒါပေမယ့်သူမ Shiva ကိုမချစ်ပါဘူး။ Aruna သည်သူ၏ဘဝသို့ပြန်လာကာအံ့သြဖွယ်ရာအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
22. 'Puli' 'Puli' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုခေါ်တွင်
ပလီ (2015) သည် Chimbu Deven မှရိုက်ကူးပြီးရိုက်ကူးထားသောအိန္ဒိယတမီးလ်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်တွင်ဗီဂျေးနှင့်အတူအခန်းကဏ္ dual နှစ်ခုပါဝင်သည် Shruti Haasan , Hansika Motwani နှင့် Sridevi ။ ရေနံချောင်း Prabhu နှင့်ရုပ်ရှင်၏အဓိကရန်သူအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ Nandita Swetha ထောက်ပံ့အခန်းကဏ္ supporting ၌တည်၏။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တစ် ဦး flop ကြီးနှင့်အတူတူပင်နာမည်နှင့်အတူ Hind သို့အမည်တပ်ထားသော 'ပလီ' ။
ကြံစည်မှု - အဆိုပါ Vedhalams, ဘာသာရေးအင်အားကြီးပိုင်ဆိုင်သောအုပ်စုတစ်စုအားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သူ Pavazhamani ပြန်ပို့ဖို့ Maru Dheeran ရဲ့ရှာပုံတော် Yavanarani တစ်မျှောဆရာနှင့်သူမ၏လက်ထောက် Jalatharangan ဆန့်ကျင်သူ့ကိုကိုက်။
၂။ ၃ ' Aathi '' Adi Narayan '' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက် Dubbed
Aathi (၂၀၀၆) သည် Vamana နှင့် Trisha တို့၏အဓိကအခန်းကဏ္Rတွင် Ramana မှတမီးလ်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box Office ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး၊ Adi Narayan ။
ကြံစည်မှု - သူ၏မွေးစားမိဘများ၏ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်။ Aadhi သည် Chennai ရှိကောလိပ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူကသူ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမိဘများ၏သတ်ဖြတ်မှုကိုလက်စားချေရန်ရှာဖွေနေသည်။ သူလည်းအစီအစဉ်ရှိပြီးသူ Anjali, အဘို့အတွေ့ဆုံနှင့်ကျရောက်ပါတယ်။
၂၄ ‘ အဖြစ်ဟိန်ဒီအတွက်အမည်တပ်ထားသော Pudhiya Geethai '' ‘Ek Dumdaar အဆိုပါအစွမ်းထက် ''
Pudhiya Geethai (2003) K.P. ကရေးသားနှင့်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး တမီးအရေးယူ - ဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ဗီဂျေးသရုပ်ဆောင် Jagan Meera စံပယ် နှင့် Ameesha Patel က ဦး ဆောင်မှုအခန်းကဏ္၌တည်၏။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box-office မှာလာသောသေတ္တာကြီးနှင့်ဟိန္ဒူအဖြစ်အမည်ရှိခဲ့သည် 'Ek Dumdaar The Powerful' ။
ကြံစည်မှု - Sarathy သည်နုပျိုပျော့ပျောင်းပြီးပျင်းရိပျော့ပျောင်းသောလူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးနက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာတစ် ဦး သည်အသက် ၂၇ နှစ်တွင်သူမသေဆုံးရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်ကိုမသိသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင် Reddiar နှင့်စာချုပ်ချုပ်ပြီးမြေယာသဘောတူညီမှုပျက်ပြားသွားသည်။
၂၅ ‘ Ghilli ကို 'Keertimaan' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Ghilli (၂၀၀၄) သည်အိန္ဒိယဘာသာစကားပြောဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Dharani မှဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တွင် Vijay နှင့် Trisha တို့ကို Ashish Vidyarthi၊ Dhamu, Prakash Raj, Mayilsamy နှင့် Janaki Sabesh တို့ကအဓိကအခန်းကဏ္ roles မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်စူပါ hit ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် 'Keertimaan' ။
ကြံစည်မှု - Kabaddi ကစားသမား Velu သည် Madurai သို့ရောက်ရှိပြီးမိန်းကလေး၏ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်။ လက်ထပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်သော Muthupandi မှ Dhanalakshmi အားကယ်ဆယ်သည့်အခါဒေသတွင်းပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ရန်ဖြစ်သည်။
မင်းသား swvyy လက်ထပ်ထိမ်းမြားဓာတ်ပုံများ arvind
မင်းသမီးနာမည် aao, kabhi yaadon mein
hum tum နှင့်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်
Karan Johar ဇနီးနှင့်ကလေးတွေ
ileanadcruz အမြင့်နှင့်အလေးချိန်
hai ကြယ်သွန်းတန်းတူ bhabhiji ghar